Waa Kuwee Shanta Ciyaartoy Ee Sababta U Noqday In La Eryo Ancelotti? | Himilo Media Group
Markii shaqada laga caydhiyey tababare Ancelotti, waxa saaxadda soo galay madaxweynaha Bayern Munich, Uli Hoeness oo qiray in sababta shaqada looga eyey ay ahaayeen in shan ka mid ah ciyaartooyada udub-dhexaadka u ah kooxdu ay kasoo horjeedsadeen.
Tababare Ancelotti ayaa Arbacadii kursiga kaydka geliyey shan ka mid ah ciyaartooyada waaweyn ee kooxda oo kala ahaa Arjen Robben, Frank Ribery, Muller, Boeteng iyo Hummels, khamiistiina waxa soo baxday warqaddii shaqada lagaga eryayey.
Habaddaba, warbaahinta waddanka Germany ayaa baahiyey magacyada shanta ciyaartoy ee sababta u noqday eriga Ancelotti.
Arjen Robben: Qofna shaki ma gelin karo in laacibka reer Holland aannu la dhacsanayn Ancelotti, markii ay dhamaatay ciyaartii kaydka la geliyey ee PSG ay ku xasuuqday 3-0, waxa uu Robben u sheegay warbaahinta in aanu difaacaynin Ancelotti haddii shaqada laga eryayo. Tani waxay caddaynaysaa in Robben uu yahay jabhadka ugu horreeya ee dagaalka kula jiray tababaraha ruug caddaaga ah.
Franck Ribery: Ancelotti waxa uu hirgeliyey siyaasad ah in uu isku bedbeddelo ciyaartoygiisa, taasina waxay keentay in maalinba uu qaar ciyaarsiiyo. Laakiin Ribery fallaago ayuu noqday, gadood uu ka qaaday kaydka la geliyey ayaanu geeska geliyey tababaraha, taas oo markii ay is garabsadeen Robben ay noqdeen cadow awood leh oo lilijiyey rukumadii uu ku taagnaa Ancelotti.
Thomas Muller: Mid ka mid ah ragga ugu taariikhda weyn kooxdaas oo aan looga baranin inuu sabab la’aan kaydka u galo. Waxa uu wacdaro dhigay cahdigii tababare Louis van Gaal, intii ka dambaysayna lagama qaban. Markii uu kaydka geliyey Ancelotti, waxa uu noqday nin god abeeso galay.
Jerome Boateng: Difaaca ugu adag ee kooxda ayaa Arbacadii fadhiyey, waxaanu indhihiisa ku arkay PSG oo goolal badan ka dhalinaysa naadigiisa Bayern Munich. Haddii uu ku jiri lahaa, waxa suurtogal ahaan lahayd inuu ka difaaci lahaa, laakiin debinta ayuu qaniinay isagoo ciil u qaba tababarihiisa.
Mats Hummels: Lama hubo inuu yahay cadowga shanaad, waxase suurtogal ah, inay booska ku haystaan Lewandowski iyo Coman oo ay iyaguna cadow ku ahaayeen tababaraha la eryey.